Euro 2020: Maxaa lagu heystaa ciyaartoyda Turkiga ee isree-reebka qaramada Yurub? - Latest News Updates
Euro 2020: Maxaa lagu heystaa ciyaartoyda Turkiga ee isree-reebka qaramada Yurub?
Howlgalka Milatari ee uu Turkiga ka wado Suuriga ayaa hadda hareynaya ciyaarta ka tirsan isree-reebka Euro 2020 ee ay France iyo Turkey isniinta ku yeelan doonaan magaalada Paris.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Yves Le Drian ayaa markii hore qorsheynayay inuu tago garoobka ay ciyaartaas ka dhaceyso, balse wuxuu hadda ku dhawaaqay inuu baajiyay ka qeybgalistiisa.
Sidoo kale xildhibaan ka tirsan xisbiga midigta dhexe ee UDI, oo lagu magacaabo Jean-Christophe Lagarde, ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku yiri: “Siduu qof ku oggolaan karaa in ciyaar ka tirsan tartamada kubadda cagta loo adeegsado ol’ole siyaasadeed oo lagu taageerayo waddan faragalin milatari ku sameeyay waddan kale oo xulafadeenna ah?”
Ciyaartoy ka noqotay taageero ay u muujiyeen sawirka
Guddiga anshaxa ee Uefa ayaa mamnuuc ka dhigay “in wax walba oo caro abuuri kara loo adeegsado ciyaaraha iyo munaasabadaha kale ee la xiriira, gaar ahaan arrimaha siyaasadeed ee muranka dhaliya, fikrado, diin iyo waxyaabo kale oo dhib loo arki karo”.
Labo ciyaartoy oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga, balse u ciyaara xulka qaranka Jarmalka – oo kala ah Ilkay Gundogan iyo Emre Can – ayaa astaan taageero muujineysa saaray sawirka salaanta milatariga ee uu soo galiyay Tosun, hase yeeshee labadooduba markii dambe way ka noqdeen taageeradaas.
Bishii May ee sanadkii 2018-kii, Gundogan oo ah xiddig u ciyaara kooxda Manchester City iyo Mesut Özil oo u ciyaara kooxda Arsenal ayaa lagu dhaleeceeyay sawirro ay lasoo galeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Bishii June ee isla sanadkii 2018-kii, Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka ee Fifa ayaa ganaax dul dhigay saddex ciyaartoy oo ka tirsan xulka qaranka Switzerland, ka dib markii ay astaamo muujinaya qarannimada Albania kusoo bandhigeen ciyaar ka tirsaneyd tartankii Koobka adduunka oo ay la yeesheen xulka Serbia.